12 AbaPhicileli abaBonakalayo abaBakhulu kunabo bonke ixesha
Ukuba ubuza oogqirha bezembali obalaseleyo abaculi ababonakalayo bexesha lonke, bekuya kubakho ininzi yamagama ahlukeneyo. Ewe, kukho imilinganiselo emininzi ongayenza ngayo ukuba ngabaphi abaculi bezona zizo zonke iimeko.
Ngelishwa, ihlabathi lobugcisa liye lalawulwa ngabantu ngokubanzi, kwaye abafazi beentlobo zeentlobo zeentlobo zeentlobo zeentlobo zezilwanyana abahlala besetyenziswe ngokukhawuleza naphezu kwegalelo elikhulu. Kubalulekile ukuba abafazi beengcali baqatshelwa njengengxenye ye-canon, nangona kunjalo, ngomsebenzi wabo unobungakanani obuphezulu kunye nobunzima, kwaye abanye bafumana impumelelo kwimihla yabo nangona kunzima imiphakathi.
Kukho imiba emininzi enokumisela ukuba umculi othile wenza uluhlu. Omnye wabo ngumkhwa kunye nemfashini yesikhashana umculi ahlala kuyo, enye inokuhlala ixesha elide lokuthandwa ngumculi. Iimpembelelo ezenziwe ngumculi kwixesha lakhe ziyinto enye yokuqwalasela. Ekuhambeni kwexesha, ukugqiba ukuba ngabaphi abaculi bezona zikhulu kunabo bonke bangaba nembono othobelayo; nangona kunjalo, ngokusekelwe kwimbono yoluntu kunye nento efunyanwa ngayo iimyuziyamu, ezi-10 zezona zinto zibonwayo kakhulu zizobugcisa:
U-Michelangelo uthathwa njengomdwebi omkhulu kunye nomdwebi wexesha lonke. Wayeyintsika enkulu ye-Renaissance e-Italy, ngakumbi eFlorence naseRoma. Ngamhla, ezinye zeempawu zakhe zemarbo zibuhle obungenasici.
U-Michelangelo uyaziwa ngokuba ngumfanekiso waseNtaliyane wokubuyiselwa kwakhona kunye neefrescoes ze-Sistine Chapel, phakathi kwezinye izinto ezinobungcali zobugcisa.
2. I-Rembrandt van Rijn (1606-1669)
U-Rembrandt uyi-genius yaseDutch eyayidala iinqununu eziyinhloko.
I-Rembrandt iyaziwa ngokugqithiseleyo ngokuthanda kwakhe kwipali yezembali kunye nendawo yokuphila. Wenza imiqheko emininzi eyaziwayo ngokwemvakalelo yazo, oko kutheni u-Rembrandt wachazwa njengomtsalane.
3. UPablo Picasso (1881-1973)
UPablo Picasso, umsunguli we-cubism, ungomnye wabaculi abanempembelelo kakhulu kwimbali.
Wayengumdwebi, umshicileli, umdwebi, kunye neeramicist. Wenza iimifanekiso ezininzi zepeyinti yekhulu lama-20. Uzalwe kumzali wengubo, uPicasso wamkela yonke into eyayikukhuthazwayo yokwakha umsebenzi wokupenda ngempumelelo. Oku kwamnika ilungelo lokufunda ubugcisa kwezinye zezikolo zobugcisa obugqibeleleyo eSpain.
Wayephakathi kwabalingisi abangama-250 ababonisa i-3rd Sculpture International eyayibanjwe eMelika. Isitayela sakhe kunye nobuchule bakhe bubukhulu becala kulo lonke ixesha lokuphila kwakhe, ukuvelisa inani elingu-50,000 lomsebenzi, kuquka imidwebo, imizobo, kunye nemifanekiso, phakathi kwabanye. Kuzo zonke iintlobo zobungcali, uPicasso uninzi kakhulu kwimifanekiso.
4. ULeonardo da Vinci (1452-1519)
ULeonardo wazalelwa eFlorence, e-Italy. Nangona wayephila iminyaka emininzi edlulileyo, usengumnye wabaculi abanempembelelo kunabo bonke. Uqeqesho lwakhe kuphela lwaloo ntsimi yenzululwazi kwaye wafundiswa esemncinci kwi-renowner paintterterter of the time. ULeonard wayebhekwa njengengqiqo ebomini bakhe ngenxa yokuthanda kwakhe isayensi.
Iminikelo kaLeonard kwihlabathi lobugcisa yayincinci, kodwa ezimbini zokudweba zakhe ziyaziwayo namhlanje: "Mona Lisa" kunye ne "The Last Supper." "ISidlo Sokugqibela" kuphela yindawo yokuphila eFresco da Vinci.
Inyaniso yokuba inzala yakhe yayingaphaya kobugcisa kwakungekho isizathu sokuba isizathu sakhe sasincinci. Ebudeni bakhe bokuphila, wayexakeke kakhulu kwi-physics kunye ne-mechanics, kangangokuthi wadala izinto ezibonakalayo zobugcisa beebhayisiki, phakathi kwezinye izinto.
Yiyo yinto ekholelwa ngokuqhelekileyo ukuba yimbangela yokungaphumeleli kwakhe ukugqiba ezininzi iimifanekiso kunye neeprojekthi zobugcisa. Kukho iingxelo ezithembekileyo zokuba wachitha ixesha elininzi lokucinga nokuvavanya imithetho yezesayensi, kunye nokubhalwa kwakhe ngqalelo.
5. UClaude Monet (1840-1926)
UClaude Monet ubizwa ngokuba ngumsekeli wepeyinti yeFrench Impressionist. I-Monet yayinomdla onamandla wokubhalwa kwimihlaba esemaphandleni. Oku kwakukuzalwa kwakhe kwimizobo yecwecwe. Xa uMonet waya eParis, wabona abaculi abaningana bekopisha imisebenzi evelele yabanye abaculi.
Esikhundleni sokulandela le ndlela, i-Monet yavelisa umkhuba wokuhlala ngeefestile ekhoyo kunye nokudweba oko akubonayo.
Kancinci, uMonet wathandwa kakhulu. Wathonya abaculi abancinci abancinci waza wenza ukuba bazibophezele ekuthandweni, kwaye emva kwexesha elifutshane, ukunyaniseka kwaba yindlela eyaziwayo yokupenda eParis. Ngethuba elithile ngo-1874, umboniso wokuqala wokuzibonakalisa wenziwa eParis. Kuloo mboniso, i-Monet yabonisa ubuninzi bezinto zobugcisa ezili-12, ezibandakanya imizobo emihlanu kunye nee-pastel ezisixhenxe.
6. UVincent van Gogh (1853-1890)
Wazalelwa eNetherlands, uVan Gogh wayengumdwebi obalaseleyo osebenza ngayo ubugcisa asethengiswa ngamaxabiso angakholwayo kwihlabathi namhlanje. Igalelo lakhe kwezobugcisa lalipopayi. Wadala imifanekiso emininzi yokuphila, ininzi yabo yayingu-portraits of friends and acquaintances. Kuzo zonke, uVan Gogh wagqiba malunga nee-800 zokupenda. Enye into eyayimbonakalisa njengomdwebi, yayiyikubamba kwakhe ubuhlobo bombala kunye nomsebenzi onobumba obodwa. Umsebenzi wakhe usengumthombo omkhulu wokuphefumlelwa kwabaninzi abavakalisi emhlabeni jikelele.
7. UAustuste Rodin (1840-1917)
URolin wayeyindoda enomdla kunye nomdwebi ozinikezele. Ungumzukeli ofanelekileyo kwiingqondo ezinjengeMichelangelo. U-Rodin uthandwa ngokuba ngumdwebi obalaseleyo wexesha langoku. Impumelelo yakhe itholakala kumandla akhe okutshintsha ilitye nobumba ngeendlela ezinzima. Ngethuba lokuphila kwakhe, uRudin wazuza ngokubambisana nabaqulunqi beemifanekiso kwiiprojekthi eziliqela.
8. UJan van Eyck (1390-1441)
Ngomnye wezona zinto ziphawuleka kakhulu kwi-Northern Renaissance artists kunye nemisebenzi yakhe eninzi ikopishwa namhlanje.
Ngaphandle kokusebenza enkundleni, u-van Eyck wakhiqiza imifanekiso emininzi yabathengi ngabangasese. Enye into eyayiyinto eyimfuneko kuye kukuba wayengumdwebi kuphela ngexesha lakhe ukuze asayine iinqwelo zakhe.
9. UDonatello (1386-1466)
UDonatello uthathwa njengomdwebi mkhulu wekhulu le-15. Akungabazeki ukuba omnye wabaculi bezona zinto zibalaseleyo. Wayenobulumko kakhulu ngomthi, i-terracotta kunye namatye.
10. UPeter Paul Rubens (1571-1640)
UPeter Rubens wayengumntu onamandla kunabo bonke ekusebenziseni ubugcisa baroque. Igalelo lakhe kwezobugcisa kwakuyizinto zokudweba; Nangona kunjalo, wakhiqiza phantse zonke iintlobo zokudweba. Wayexhamla kakhulu, evelisa iimifanekiso kunye nemifanekiso yemifanekiso kunye nemifanekiso yokusebenza kwensimbi kunye nemifanekiso.
11. uElisabeth Louise Vigée-Le Brun (1755-1842)
UVigée-Le Brun wayengomnye wabantu abadumileyo beemifanekiso yeli-18 leminyaka yeFransi kunye nomfazi ogqwesileyo owaziwayo eYurophu. Ngetalenta kunye nokunyamezela kwakhe waphumelela kwelinye lexesha elibuhlungu kakhulu lembali yesiFrentshi neYurophu, kwaye waba ngumnye wabathengi abathandekayo bakaReine Marie Antoinette. Wabhala ngaphezu kweengu-20 zee-portraits zikaMarie Antoinette, kunye neentetho zabanye abahloniphekileyo baseYurophu, abadlali kunye nabalobi, ngokukodwa abafazi. Wanyulwa ukuba abe yimfundo yezobugcisa kwiidolophu ezili-10. Wadala ngaphezu kwe-900 imizobo ebomini bakhe, kubandakanya ama-portraits angama-600 kunye namazwe angama-200.
12. Georgia O'Keeffe (1887-1986)
IGeorge O'Keeffe wayengomnye wabalingcali abaluleke kakhulu kunye nabaphumeleleyo bekhulu lama-20.
Wayengomnye wabalingisi bokuqala baseMerika ukuba amkele ukukhutshwa kwaye waba enye yeenkokheli ze-American Modernist. Ubugcisa bakhe bubuqu kunye nobugcisa. Uyaziwa ngemifanekiso yeentyatyambo ezinkulu, iimpawu zeemidlalo zaseNew York ezimangalisayo, kunye neendawo ezisemzantsi-ntshona.
Imbali kunye neMifanekiso yeBas-Relief Sculpture
Abafazi bakaPicasso: iGermaine Gargallo Florentin Pichot
Ixabiso lichazwe njani ngoBugcisa
Isingeniso kwi-Art representation
Uludwe Lwenjani Ekhaya?
Fumana iNgcaciso yoBugcisa beContemporary Art
Biography kaRobert Indiana
I-Perl Array iqhagamshelwano () Umsebenzi
Indlela Yokugwema Ukubuya
Ixesha lexesha elichaphazelekayo kunye neNkcubeko yakho
Isikhokelo sokuBamkelwa kweeSikolweni esikolweni
I-Putting Green Apron
INdlu yesibhozo kwi-Astrology
IYunivesithi yaseGethel yeGPA, iSAT kunye ne-ACT
Iimigibe zeSitatimende se-If-Then-Else kwi-Delphi Code
Abalawuli bePtolemies - IYiputa yaseYiputa esuka kuAlexandre ukuya eCleopatra